Echiche Ideba Egwu - Atụmatụ Echiche Tattoos
Echiche Ideba Ama
1. Ụjọ egbu egbu na azụ mere ka nwoke dị mma
Mmadụ na-enwe mmasị iji egbu egbu na-egbu egbu na azụ ya. Nke a na-enye anya dị mma
2. Ụta dị oke ọnụ na-eme ka mmadụ nwee ọdịdị mara mma
Ndị ikom dị ka Ụdị egbu egbu na afọ ha. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha nwee ọdịdị dị ebube
3. Ụjọ egbu egbu na-eme ka nwoke dị mma
Ndị ikom Brown ga-aga maka mkpara ink nke oji na-ama egwu na aka ha; egbu egbu a na-emetụta akpụkpọ anụ ahụ iji mee ka anya na-atụ egwu
4. Ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ na-eme ka mmadụ nwee ihu ọchị
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịchọta Ụka ​​Dị Oké Ọnụ Ahịa n'elu ọnụ. Eche egbu egbu a na-egosi ọdịdị anụ ọhịa ha.
5. Ọnụ ọgụgụ dị egwu na ogwe aka dị elu na-eme ka nwoke nwee anya dị mma
Ndị na-ahọrọ uwe elu na-akaghị aka ga-aga maka egbuke egbuke n'elu ogwe aka ha nke nwere mkpịsị osisi iji nye ha anya mara mma.
6. Ụjọ egbu egbu na azụ na-eme ka nwoke dị jụụ
Ndị mmadụ na-enwe mmasị iji Ụdị Ọnụ Ahịa dị n'azụ ha na-eji ihe nkedi ink ojii; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
7. Ọnụ ọgụgụ dị egwu na-acha anụnụ anụnụ na pink, imepụta ifuru na-eme ka nwoke mara mma
Ndị ikom Brown na-aga maka ink na-acha anụnụ anụnụ na pink, imepụta osisi na-egbuke egbuke egbugbu n'ubu ha; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma maa mma
8. Ụdị Oké Ọnụ Ahịa nke dị n'elu olu n'olu na-eme ka mmadụ nwee ọdịdị mara mma
Ndị mmadụ dị ka Ụjọ na-atụ egwu na-agbapụ aka n'olu. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha nwee ọdịdị dị ebube
9. Ọnụ ọgụgụ dị egwu n'azụ azụ na-eme ka ụmụ nwanyị mara mma
Ndị inyom na-ahụ Ụdị Oké Ọnụ Ahịa na azụ azụ ha; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
10. Ọnụ ọgụgụ dị egwu na ogwe aka aka nri nke nwere ncha ifuru na-eme ka nwoke dị mma
Ndị mmadụ na-enwe mmasị na-egbu egbu egbugbu dị n'elu aka nri ha na-emepụta mma ifuru pink. Nke a na-enye ndị mmadụ ezigbo mma.
11. Ụdị Oké Ọnụ Ahịa na aka nri aka nri na-eme ka nwoke na-ele anya
Ndị mmadụ ga-ahọrọ iji Ụka a dị egwu n'akụkụ aka nri aka nri ha nwere ụdị imepụta ink. Nke a na-eweta ọdịdị ha.
12. Ọnụ ọgụgụ dị egwu n'azụ na-eme ka ụmụ mmadụ nwee ọkpụkpụ
Ndị mmadụ na-aga maka egbu egbu na azụ. Ụdị egbu egbu a na-egbuke egbuke egbugbere ọnụ, nke na-enye ha ọdịdị ahụ
13. Ọnụ ọgụgụ dị egwu n'ubu aka ekpe na-eweta ọmarịcha anya
Ụmụ agbọghọ dị ka mgbanaka nke ink na-acha akwụkwọ ndụ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma.
14. Ọnụ ọgụgụ dị egwu na -emepụta ink ojii na-eweta ọmarịcha anya
Ụmụ nwanyị Brown na nwa ntutu isi ga-ahụ Ụdị Ọnụ Ahịa na ejiji ink ojii; egbu egbu egbu a na-acha ntutu na akpụkpọ ahụ iji mee ka ha yie ihe dị mma ma maa mma
15. Ụjọ egbugbu n'aka na-eweta anya dị ịtụnanya
Ụmụ agbọghọ Brown ga-enwe mmasị na mkpịsị ink nke nwa okirikiri Ụdị egbugbu n'aka ha; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị ịtụnanya ma dị mma
16. Ụdị a na-atụ egwu n'ahụ ahụ nke nwere agba gbara ọchịchịrị ga-agbakwunye na ahụ ọkụ ahụ iji nye anya nsị
Ndị na-acha ọcha akpụkpọ anụ ga-ahọrọ akara ime mmụọ nke egbuke egbuke egbuke n'ahụ ahụ. Nchepụta Ink nke Aghụghọ Aghụghọ a ga-enye ha anya swagger
17. Ụdị egbu egbu n'apata ụkwụ na-enye ụmụ agbọghọ ahụ anya mara mma
Ụmụ agbọghọ, ma na-eyi obere uwe na obere mkpịsị ụkwụ ga-aga maka Ụka ​​Ọnụ Ahịa dị n'akụkụ akwara ha ka ha mee ka ụmụ nwoke mara mma.
18. Ọnụ ọgụgụ dị egwu maka apata apata ụkwụ na-eweta anya nwanyi ha.
Ụmụ agbọghọ dị ka Ụdị egbu egbu dị egwu n'apata ụkwụ ha. Ụdị egbu egbu a mara mma ma mee ka àgwà ụmụ nwanyị dịkwuo mma.
19. Ụjọ egbu egbu na azụ, mee ka ụmụ agbọghọ mara mma
Ụmụ nwanyị ndị na-ahụ maka peach ga-aga maka egbu egbu a magburu onwe ya na ifuru na ụda dị n'azụ, iji mee ka ha nwee anya mara mma.
20. Ụjọ dị egwu n'ubu aka n'olu na-eme ka nwoke mara mma
Ntughari ink na-acha anụnụ anụnụ nke Ụjọ dị egwu n'ubu a na-agbapụ n'olu ga-ejikọta akpụkpọ anụ iji mee ka nwoke mara mma
21. Ụda egbu egbu na ozi na-eme ka nwoke mara mma
Ndị mmadụ na-aga maka Ọnụ Ahịa dị oke egwu na-eji ejiji nwa okwute na-acha anụnụ anụnụ n'aka ha; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
22. Ụdị egbu egbu n'apata ụkwụ na-enye ụmụ agbọghọ ahụ anya mara mma
Ụmụ agbọghọ, karịsịa uwe na obere mkpirisi dị mkpirikpi ga-aga maka Ụdị Ọnụ Ahịa na ifuru na ihu n'akụkụ akwara ha iji mee ka ha mara mma karịa ụmụ nwoke.
23. Ụjọ dị egwu na aka aka nri na-eme ka mmadụ dị ka onye nzuzu
Ndị mmadụ na-enwe mmasị iji aka nri ha na -emepụta ihu igwe ojii. Ụdị egbu egbu a na-eme ka ha nwee ọdịdị ihu efu.
24. Ụjọ egbu egbu na ụkwụ ụkwụ aka nri na-eme ka nwoke dị egwu
Ndị mmadụ ga-ahụ Ụdị Ọnụ Ụba na ụkwụ aka nri ha na nhazi azụ azụ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka anya ha dị elu
okpueze okpuezeAnkle Tattoosegbu egbu diamondegwu egwuakwara obiỤdị ekpomkpaenyí egbu egbuakpị akpịegbugbu egbugbuzodiac akara akararip tattoosọdụm ọdụmegbu egbu mmiriegbu egbu okpungwusi pusiagbụrụ ebodi na nwunyekoi ika tattoondị na-egbuke egbukeụmụnne mgbuUche obiegbugbu maka ụmụ agbọghọna-egbu egbuna-adọ aka mmaaka akandị mmụọ oziazụ azụechiche egbugbuegbu egbu osisi lotusụkwụ akamma tattoosGeometric Tattoosegbu egbu ebighi ebiEgwu ugoegbu egbu egbumehndi imeweakara ntụpọegbu egbuenyi kacha mma enyiọnwa tattoosaka mma akannụnụegbu egbu maka ụmụ nwokeaka akaudara okooko osisiima ima mmaarịlịka arịlịkaegbu egbu hennaNtuba ntugharin'olu olu